हिन्दु संस्कृतिमा यसरी गरिन्छ पत्नीको सम्मान, र सुरक्षा ! – Jagaran Nepal
हिन्दु संस्कृतिमा यसरी गरिन्छ पत्नीको सम्मान, र सुरक्षा !
काठमाडौं।संस्कृति कुनै पनि राष्ट्रको परिचायक मात्र होइन, विशेषता पनि हो । वर्तमान समयमा नेपाल हिन्दु राष्ट्र होइन तापनि प्रायः नेपालीहरूले वैदिक सनातन धर्मलाई अङ्गिकार गर्दै आएका छन् । यही वैदिक सनातन धर्म तथा परम्परागत सभ्यता नै हिन्दु संस्कृति हो । हिन्दु संस्कृतिको मूल आधार वेद हो भने स्मृति, पुराण, उपनिषद्हरू वैदिक सनातन धर्म तथा संस्कृतिका खम्बा हुन् । हिन्दु संस्कृतिमा पत्नी हुनका निम्ति विवाह गर्नैपर्दछ । हिन्दु विवाह पद्धतिमा पाणिग्रहण कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र विवाह भएको मानिन्छ ।
विवाहको मण्डपमा पनि सिन्दूरार्पण पछि स्थान साटासाट गरे पछि मात्र पत्नी भन्न पाइन्छ । सिन्दुरार्पण भन्दा अघि बधुकन्या हुन्छिन् भने त्यसपछि मात्र उनी पत्नी बन्दछिन् भन्ने सनातन मान्यता रहेको छ । पत्नी शब्द पति शब्दकै स्त्रीलिङ्गी रुप हो । त्यसैले गृहपति भन्दा घरको मालिक भन्ने बुझिन्छ भने गृहपत्नी भन्दा घरकी मालिक्नी भन्ने बोध हुन्छ । पत्नीलाई हिन्दु संस्कृतिमा भार्या, जाया, सहधर्मिणी, गृहिणि इत्यादि धेरै शब्दहरूले चिनिन्छ । स्त्रीका विभिन्न स्वरुपहरूमध्ये पत्नीको स्वरुप एक उच्च प्रियतम मानिन्छ ।
एउटी नारी छोरी, दिदी, बहिनी, श्रीमती, बुहारी, आमा आदि स्वरुपबाट चिनिन्छन् । वेदमा धेरै स्थानमा पत्नीको प्रसङ्ग पाइन्छ । त्यहाँ पतिलाई पत्नीको इच्छा गर्ने र पत्नीलाई पतिको इच्छा गर्ने परस्पर अनुरागीका रूपमा पनि उल्लेख गरिएको छ । पति र पत्नीको आत्मीय मेलबाट नै आदर्श घर बन्न सक्दछ । पति र पत्नीबीचको आत्मीय सद्भावनाले मात्र सुन्दर र रमणीय गृहसंसारको निर्माण हुन्छ । सनातन धर्ममा मानव जीवनलाई ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास गरी चार आश्रममा विभाजन गरिएको छ । यी चार आश्रममध्ये गृहस्थाश्रम सबै आश्रमको आश्रय रहनुको साथै मानव जीवनसँग सम्बन्धित अन्य प्राणीहरुको पनि आश्रय स्थल हो । गृहस्थाश्रम यस्तो आश्रम हो जसको अभावमा संसारको कल्पना पनि हुन सक्दैन । ब्रह्मचर्य आश्रममा शारीरिक एवं मानसिक रुपले परिपक्व भएपछि गृहस्थाश्रममा जान इच्छुक व्यक्ति गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्न सक्दछ । गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्नु भनेको नै विवाह गर्नु हो । चारवटा आश्रम मध्ये सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थाश्रम नै हो ।
हिन्दु संस्कृतिमा यसरी गरिन्छ पत्नीको सम्मान,अन्य आश्रमहरूमा सहयात्रीको आवश्यकता पर्दैन तर गृहस्थाश्रमका लागि पत्नी अनिवार्य हुन्छिन् । वास्तवमा पत्नी विनाको घर घर नै होइन जुन घरमा गृहिणी हुन्छिन् त्यही नै घर हो । गृहिणी नभएको घरलाई वनजस्तै मानिएको छ । रुखमुनी अर्थात् जङ्गलमा नै किन नहोस् पत्नीको साथ छ भने त्यही नै गृह हो । आफ्नी पत्नी (कान्ता) नरहेको दरबार पनि वन हो भनेर व्यासले भनेका छन् । हिन्दु संस्कृतिमा घर हुनका लागि पत्नी अनिवार्य रहेकोले पनि नारीहरूको स्थान के कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । वैदिक हिन्दु सनातन धर्ममा प्राचीन कालदेखि नै पत्नीको सम्मान हुँदै आएको छ । पत्नीलाई अर्धाङ्गिणी पनि भनिएको छ अर्थात् पत्नी विना मानिस पूर्ण हुन सक्दैन । पत्नी अर्धाङ्गिणी मात्र होइन मित्र पनि हुन् । आफ्नो पत्नीसँग घर चलाउने मात्र कुरा हुँदैनन्, मनका अन्तरङ्गका कुराहरू पनि गरिन्छ यस दृष्टिले हेर्दा पत्नी एक असल मित्र पनि हुन् जसले दुःख सुखमा साथ दिनुको साथै सल्लाह पनि दिन्छिन् ।
पतिको खुशीमा आफ्नो खुसी र पतिको दुःखमा आफ्नो दुःख संझने हुनाले नै वास्तवमा पत्नीलाई अर्धाङ्गिणी भनिएको हो । त्यसैले पनि पत्नीलाई मित्रको रुपमा शास्त्रले सम्मान दिएको हो । सन्तानलाई हुर्काउन–बढाउन र कर्मठ बनाउन पत्नीको भूमिका महत्त्वपूर्ण मात्र होइन अपरिहार्य पनि रहेको छ । वंशको निरन्तरता, कुलको मर्यादा जोगाउन आफ्नो स्वाभिमान जोगाई राख्न र आफूलाई शारीरिक मानसिक रुपले सदा तयारी अवस्थामा राख्न पनि पत्नीको साथ आवश्यक हुन्छ । त्यसैले मनुले भनेकाछन्– आफ्नो सन्तानको, चरित्रको, कुलको, धर्मको र आफ्नो रक्षा समेत आफ्नी पत्नीको रक्षाबाट मात्र सम्भव छ । यति मात्र होइन सन्तानको प्राप्ति, धर्मकार्य, सेवाको साथै पितृहरुको र आफ्नो आनन्द तथा स्वर्ग पनि पत्नीको अधिनमा रहेको कुरा पनि मनुले बताएका छन् ।
र्मपत्नीका यथोचित, योग्य, समय सुहाउँदा मागहरूको सम्बोधन गर्नुको साथै पत्नीलाई माया, ममता, स्नेह दर्शाएर वस्त्र, अन्न, आभूषण इत्यादिले सत्कार गर्नु साक्षात् लक्ष्मीको पूजा गर्नु हो भनिएको छ । स्नेहपूर्वक सत्कर्म तथा सदाचारमा संलग्न गराएर र त्यस्तै कार्यमा रमाउने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्दछ । जहाँ नारीको आदर, सम्मान र सत्कार हुन्छ त्यहाँ देवताहरू प्रसन्न हुन्छन् ।